USSD भनेको के हो? | Martech Zone परिवर्णी शब्द
Martech Zone » परिवर्णी शब्द » यू बाट सुरु हुने संक्षिप्त शब्द	» USSD
USSD को संक्षिप्त रूप हो असंरचित पूरक सेवा डाटा.
मोबाइल फोनद्वारा मोबाइल नेटवर्क अपरेटरका कम्प्युटरहरूसँग सञ्चार गर्न प्रयोग गरिने सञ्चार प्रोटोकल। USSD को साथ, मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले मेनुहरूबाट चयन गरेर सीधा अन्तरक्रिया गर्छन्। एसएमएस सन्देशको विपरीत, USSD सन्देशले प्रत्येक सत्रसँग वास्तविक-समय जडान सिर्जना गर्दछ, सूचनाको दुई-तर्फी सञ्चार सक्षम पार्दै।